Ny fanohanana horonan-tsary amin'ny mailaka dia mitombo - ary miasa | Martech Zone
Miaraka amin'ny fikarohana lalina be dia be, ireo moanina indray dia namorona infographic hafa mahaliana Mailaka horonantsary . Ity infographic ity dia manome statistika sarobidy momba ny antony ilàna ny fampiasana video amin'ny mailaka ilaina, fomba tsara indrindra hampidirana horonan-tsary amin'ny mailaka ary angano sasany mifandraika amin'ny fampiasana horonan-tsary amin'ny mailaka.
Ity infographic ity dia hitarika anao amin'ny alàlan'ny maha-zava-dehibe ny fampiasana horonan-tsary amin'ny alàlan'ny mailaka, karazana mailaka video hafa, angano mifandraika amin'ny fampiasana video amin'ny mailaka sns. Email amin'ny Acid ary data sy andrana Monks Email, farafaharatsiny 58% amin'ireo mpampiasa rehetra no afaka mahita ilay horonan-tsary amin'ny mailaka. Ny 42% n'ny mpampiasa rehetra dia hahita ny sary fallback fotsiny fa tsy video. 55% -n'ny mpivarotra izao no toa mampiasa video amin'ny mailaka. Infographic koa dia hanoro ny sasany amin'ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampidirana horonantsary anaty mailaka.
Tags: infographic mailakainfographic marketing amin'ny mailakamoanina mailakamailaka amin'ny asidrahoronantsary mailakamailaka horonantsaryhoronan-tsary amin'ny mailakafanohanana horonan-tsary